Midowga yurub oo ka horyimid qorshaha Nabada ee B/Dhexe - BANDHIGA
Midowga yurub oo ka horyimid qorshaha Nabada ee B/Dhexe
Wadamada midowga Yurub ayaa diiday qorshaha madaxweyne Donald Trump ee loogu magac daray heshiiska qarniga ee bariga Dhexe.
Madaxa siyaasada arimaha dibada Yurub Josep Borrell ayaa sheegay in talaabada Mareykanka ay xadgudub ku tahay madax banaanida Falastiin.
Mr Borrell ayaa hadalkan ka sheegay warsaxaafadeed ka soo saaray magaalada caasimada ah ee Brussels, kadib booqasho uu ku tagay dalalka Iiraan iyo Jordan.
Diblumaasigan ayaa intaa ku daray in Israa’iil si aan sharci aheyn ay isugu balaarineyso daanta galbeed ee dhulka Falastiin iyo buuraha Golan Heights oo dagaal ay ku qabsatay sanadkii 1967-dii.
Trump oo si rasmi ah u aqoonsaday in caasimada Israa’iil ay tahay magaalada Jerusalam oo uu ku yaal masaajidka Qudus ayaa sheegay todobaadkii hore in dhowaan uu dhaqan gali doono heshiiska qarniga Falastiin iyo Israa’iil.
Arintaan ayaa caro xoogan ku abuurtay shacabka iyo madaxda Falastiin.
Maalmo ka hor ayay aheyd markii ururka Jaamacada Carabta uu diiday qorshaha Mareykanka.
Milatariga Morocco oo gacanta ku dhigay diyaaraha aan duuliyaha laheyn
Boko Haram oo weerar ka geysatay waqooyiga Cameroon